ဗိုလ်ချုပ်မွေးတဲ့အရပ်က ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လူတစ်ယောက်… – ပဒသော
ရသစုံ | August 1, 2020 | Local News | No Comments
သူ့မှာ မိန်းမမရှိဘူး။ ကလေးလဲ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လခထုတ်ရင်တော့ သူ့ဘဏ်စာရင်းက ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။ ဘဏ်က ဝန်ထမ်းမလေးတွေကညည်းကြတယ်။ ဒီဝန်ကြီးချုပ်က သူ့လခကို အကောင့် ၂၀လောက်ဆီ ခွဲထည့်ခိုင်းတာ။ တစ်ယောက် ၅သောင်း၊ ၃သောင်းနဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပဲ … တဲ့။
ဒီလိုသာ ညည်းနေပေမဲ့ သူတို့မျက်နှာလေးတွေကပြုံးနေတယ်။ သူတို့လည်း,သူတို့ဝန်ကြီးချုပ်က••• ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့လစဉ်အလှူကိုအကျိုးဆောင်ပေးနေရလို့ကုသိုလ်တွေရတယ်လေ။ တကယ်လို့”သင်ဟာ”မကွေးတိုင်းက ပြည်သူတွေများတွေ့မိရင်မေးကြည့်ပါ။ ပြည်သူအစစ်ကိုမေးပါ။ အများစုကိုမေးပါ။ သူတို့အားလုံးဖြေလိမ့်မယ်။ ဒီဝန်ကြီးချုပ်က အကောင်းဆုံး။ ပြီးတော့ ဆက်ပြောကြလိမ့်မယ်•• ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကို•••• “သူတို့”ဆီက မပြောင်းပါနဲ့ … တဲ့။
သူ့နာမည်•••••• “ဒေါက်တာအောင်မိုးညို”လို့ခေါ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့အိမ်မှာ,သူနေနိုင်ငံတော်က ခဏပေးနေထားတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်ခမ်းခမ်းနားနားကြီးမှာ သူပိုင် ပရိဘောဂကြီးတစ်ခုကြီးများတောင် သယ်လာတယ်။ “ဝါးကုလားထိုင်”… တဲ့။ အဲ့ဒီဝါးကုလားထိုင်မှာချိတ်ထားတာက လေးခွလေးတစ်လက်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးရဲ့ကာကွယ်ရေး-ပစ္စည်းပေါ့လေ။
မကွေးတိုင်းဆိုတာကရေနံထွက်တဲ့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းက•••• အသံသိပ်မထွက်တဲ့တိုင်း••• ဒီနေရာမှာ အဂတိလိုက်စားချင်ရင်– သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်နိုင်တဲ့နေရာ။ ဒါပေမဲ့ အခု ဝန်ကြီးချုပ်က သူ့လခတောင် မလောက်ရှာဘူးတဲ့။ ဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲသူ့မှာမုန့်ဖိုးပေးရတာနဲ့။ ချို့ငဲ့သူတွေဆိုလဲ ပေးချင်ကမ်းချင်နဲ့။ ဒီအတွက်ထွက်တာသူ့အိတ်ထဲက၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံ။
သူ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဦးစီးမှူးက– လမ်းခရီးတွေသွားရင်•• သူ့နားက ခွာခွာလေး လိုက်ပေးတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတော့•• ဒါပေမဲ့ •••• ရွာတစ်ရွာရောက်လို့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ နွမ်းပါးသူတွေများတွေ့မိရင်•••• ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကြီးက သူ့အိတ်သူ စမ်းရောဗျ ဘယ်ရှိတော့မလဲ,ပိုက်ဆံ၊သူ့လခဆိုတာသူလှူဒါန်းပေးကမ်းနေတာတွေနဲ့မှမလောက်တာပဲ။
ဒီတော့ သူက လှမ်းအော်တယ်။ ဟေ့ ကိုစိုးကျော်ထွန်းရေ (ဦးစီးမှူး)လာစမ်းပါဟေ့ “ငွေ ၃သောင်းလောက် ချေးစမ်းပါ” သြော် ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနှယ်ခက်တော့တာပဲ လူကြားထဲမှကိုယ့်လက်အောက်,ငယ်သားဆီက ပိုက်ဆံပြန်ချေးနေရတယ်လို့••• ပြီးတော့ သူ့ဖို့လဲ မဟုတ်။ မရှိ နွမ်းပါးသူကို လှူဖို့ ပေးကမ်းဖို့။ ပြီးရင် မင်းပိုက်ဆံ ပြန်ဆပ်မှာနော် လခထုတ်ရင် ငါ ပြန်ဆပ်မှာ။
ဒီလိုနဲ့ လခထုတ်ရင် ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်၊ အကြွေးတွေပြန်ဆပ်လိုက်နဲ့ သူ့မှာ သံသရာလည်နေတော့တာပဲ။ အခုဆို မကွေးတိုင်းမှာ လမ်းတွေကလဲ ပြင်လိုက် ခင်းလိုက်တာ အများကြီး။ မီးတွေကလဲ နေရာများစွာ ထပ်ထပ်လင်းလို့ အပြည့်စုံဆုံးမဟုတ်သေးရင်တော့ တဆင့်ချင်းတိုးတက်နေတဲ့အဖြစ်။ ကိုယ်တိုင်ကြုံရသူတစ်ဦးက ပြောပြတယ်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ •သူတို့က ပြောတယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်း အကူညီပေးဖို့ ဆော်သြပေးပါဆိုတော့ အစိုးရအနေနဲ့ပဲ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ရအောင်တဲ့ စီးပွားရေးသမားဆိုတာ ၁၀ဖိုးကူရင် ၁၀၀ ဖိုးပြန်ောတင်းမှာတဲ့။
ငါးမူးတန်းက ရုပ်ရှင်ကြည်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုပြန်သတိရမိသေးတော့ …။ ဒီနယ်သားတွေကပဲ ရိုးသားကြသလား? ဒီနယ်သားချင်းမို့ မကွေးက ပြည်သူတွေက ပြောကြတယ်။ ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုသာ တချိန်ပြောင်းသွားခဲ့ရင် နောက်ရောက်မယ့် ဝန်ကြီးချုပ်တော့ အတော်ကံဆိုးမှာတဲ့။ သူတို့စိတ်မှာ ဒီဒေါက်တာကြီးဟာ စံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ,နောက်လာသမျှ ဒီပေတံနဲ့ပဲတိုင်းတော့မှာ။ ဟင် သူ့လိုလဲ မကောင်းပါလား? သူ့လောက် မရိုးဖြောင့်ပါလား?
ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်နယ်ဆင်းရင် အရင်က လှူသမျှတန်းသမျှ ပေးကမ်းသမျှတွေအတွက် နိုင်ငံတော်ငွေကနေ ယူသုံးကြတယ်။ အလှူလက်ဘက်နဲ့ မျက်နှာလုပ်ကြ• သူကတော့ ဒါမျိုးကိုလဲ မသိ၊ လုပ်လဲ မလုပ်တတ်။ နယ်ကိုဆင်းရင်း နွမ်းပါးသူတစ်ယောက်တွေ့ရင်,သူလက်က သူ့အိတ်ကပ်ဆီ အလိုလျောက်။ လမ်းပေါ်မှာ ချမ်းနေရှာသူကို အနွေးထည်ဆင်းဝတ်ပေးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုပဲ သတိရသေးတော့။
အနီရောင်ကာဗာနဲ့ iPad လေးတစ်ခုက သူ့စားပွဲပေါ်မှာအမြဲရှိတယ်။ သူသွားလေရာတိုင်းလိုလို ပါတယ်။ ဒါက သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးစည်းစိမ်တဲ့။ ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံမှာ ဦးထုတ်ကြီးနဲ့ အများနည်းတူ ထိုင်စားနေတဲ့သူ့ကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို အကြွင်းမဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူတွေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိနိုင်မလဲ? ဟော့ဒီမှာ တစ်ယောက်။•••••••
[ဒီ Post အချက်အလက်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကိုသူရအောင် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်]
သူ့မှာ မိနျးမမရှိဘူး။ ကလေးလဲ မရှိဘူး။ ဒါပမေဲ့ လခထုတျရငျတော့ သူ့ဘဏျစာရငျးက ရှုပျရှကျခတျနတောပဲ။ ဘဏျက ဝနျထမျးမလေးတှကေညညျးကွတယျ။ ဒီဝနျကွီးခြုပျက သူ့လခကို အကောငျ့ ၂၀လောကျဆီ ခှဲထညျ့ခိုငျးတာ။ တဈယောကျ ၅သောငျး၊ ၃သောငျးနဲ့ အလုပျကို ရှုပျနတောပဲ … တဲ့။
ဒီလိုသာ ညညျးနပေမေဲ့ သူတို့မကျြနှာလေးတှကေပွုံးနတေယျ။ သူတို့လညျး,သူတို့ဝနျကွီးခြုပျက••• ပညာသငျထောကျပံ့ကွေးပေးတဲ့လစဉျအလှူကိုအကြိုးဆောငျပေးနရေလို့ကုသိုလျတှရေတယျလေ။ တကယျလို့”သငျဟာ”မကှေးတိုငျးက ပွညျသူတှမြေားတှမေိ့ရငျမေးကွညျ့ပါ။ ပွညျသူအစဈကိုမေးပါ။ အမြားစုကိုမေးပါ။ သူတို့အားလုံးဖွလေိမျ့မယျ။ ဒီဝနျကွီးခြုပျက အကောငျးဆုံး။ ပွီးတော့ ဆကျပွောကွလိမျ့မယျ•• ဒီဝနျကွီးခြုပျကို•••• “သူတို့”ဆီက မပွောငျးပါနဲ့ … တဲ့။
သူ့နာမညျ•••••• “ဒေါကျတာအောငျမိုးညို”လို့ချေါတယျ။ နိုငျငံတျောကပေးတဲ့အိမျမှာ,သူနနေိုငျငံတျောက ခဏပေးနထေားတဲ့ ဝနျကွီးခြုပျအိမျခမျးခမျးနားနားကွီးမှာ သူပိုငျ ပရိဘောဂကွီးတဈခုကွီးမြားတောငျ သယျလာတယျ။ “ဝါးကုလားထိုငျ”… တဲ့။ အဲ့ဒီဝါးကုလားထိုငျမှာခြိတျထားတာက လေးခှလေးတဈလကျ။ ဝနျကွီးခြုပျကွီးရဲ့ကာကှယျရေး-ပစ်စညျးပေါ့လေ။
မကှေးတိုငျးဆိုတာကရနေံထှကျတဲ့ မွနျမာပွညျအလယျပိုငျးက•••• အသံသိပျမထှကျတဲ့တိုငျး••• ဒီနရောမှာ အဂတိလိုကျစားခငျြရငျ– သိုသိုသိပျသိပျ လုပျနိုငျတဲ့နရော။ ဒါပမေဲ့ အခု ဝနျကွီးခြုပျက သူ့လခတောငျ မလောကျရှာဘူးတဲ့။ ဝနျထမျးတှဆေိုလဲသူ့မှာမုနျ့ဖိုးပေးရတာနဲ့။ ခြို့ငဲ့သူတှဆေိုလဲ ပေးခငျြကမျးခငျြနဲ့။ ဒီအတှကျထှကျတာသူ့အိတျထဲက၊ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျ ပိုကျဆံ။
သူ့ဝနျကွီးခြုပျရုံး ဦးစီးမှူးက– လမျးခရီးတှသှေားရငျ•• သူ့နားက ခှာခှာလေး လိုကျပေးတယျ။ ဝနျကွီးခြုပျဆိုတော့•• ဒါပမေဲ့ •••• ရှာတဈရှာရောကျလို့ သကျကွီးရှယျအိုတှေ၊ နှမျးပါးသူတှမြေားတှမေိ့ရငျ•••• ဒီဝနျကွီးခြုပျကွီးက သူ့အိတျသူ စမျးရောဗြ ဘယျရှိတော့မလဲ,ပိုကျဆံ၊သူ့လခဆိုတာသူလှူဒါနျးပေးကမျးနတောတှနေဲ့မှမလောကျတာပဲ။
ဒီတော့ သူက လှမျးအျောတယျ။ ဟေ့ ကိုစိုးကြျောထှနျးရေ (ဦးစီးမှူး)လာစမျးပါဟေ့ “ငှေ ၃သောငျးလောကျ ခြေးစမျးပါ” သွျော ဒီဝနျကွီးခြုပျကွီးနှယျခကျတော့တာပဲ လူကွားထဲမှကိုယျ့လကျအောကျ,ငယျသားဆီက ပိုကျဆံပွနျခြေးနရေတယျလို့••• ပွီးတော့ သူ့ဖို့လဲ မဟုတျ။ မရှိ နှမျးပါးသူကို လှူဖို့ ပေးကမျးဖို့။ ပွီးရငျ မငျးပိုကျဆံ ပွနျဆပျမှာနျော လခထုတျရငျ ငါ ပွနျဆပျမှာ။
ဒီလိုနဲ့ လခထုတျရငျ ပေးလိုကျကမျးလိုကျ၊ အကွှေးတှပွေနျဆပျလိုကျနဲ့ သူ့မှာ သံသရာလညျနတေော့တာပဲ။ အခုဆို မကှေးတိုငျးမှာ လမျးတှကေလဲ ပွငျလိုကျ ခငျးလိုကျတာ အမြားကွီး။ မီးတှကေလဲ နရောမြားစှာ ထပျထပျလငျးလို့ အပွညျ့စုံဆုံးမဟုတျသေးရငျတော့ တဆငျ့ခငျြးတိုးတကျနတေဲ့အဖွဈ။ ကိုယျတိုငျကွုံရသူတဈဦးက ပွောပွတယျ။ အစညျးအဝေးတဈခုမှာ •သူတို့က ပွောတယျ။ စီးပှားရေးသမားတှကေိုလညျး အကူညီပေးဖို့ ဆျောသွပေးပါဆိုတော့ အစိုးရအနနေဲ့ပဲ တတျနိုငျသလောကျလုပျရအောငျတဲ့ စီးပှားရေးသမားဆိုတာ ၁၀ဖိုးကူရငျ ၁၀၀ ဖိုးပွနျောတငျးမှာတဲ့။
ငါးမူးတနျးက ရုပျရှငျကွညျခဲ့တဲ့ဗိုလျခြုပျကိုပွနျသတိရမိသေးတော့ …။ ဒီနယျသားတှကေပဲ ရိုးသားကွသလား? ဒီနယျသားခငျြးမို့ မကှေးက ပွညျသူတှကေ ပွောကွတယျ။ ဒေါကျတာအောငျမိုးညိုသာ တခြိနျပွောငျးသှားခဲ့ရငျ နောကျရောကျမယျ့ ဝနျကွီးခြုပျတော့ အတျောကံဆိုးမှာတဲ့။ သူတို့စိတျမှာ ဒီဒေါကျတာကွီးဟာ စံတဈခုဖွဈသှားပွီ,နောကျလာသမြှ ဒီပတေံနဲ့ပဲတိုငျးတော့မှာ။ ဟငျ သူ့လိုလဲ မကောငျးပါလား? သူ့လောကျ မရိုးဖွောငျ့ပါလား?
ဝနျကွီးခြုပျအဆငျ့နယျဆငျးရငျ အရငျက လှူသမြှတနျးသမြှ ပေးကမျးသမြှတှအေတှကျ နိုငျငံတျောငှကေနေ ယူသုံးကွတယျ။ အလှူလကျဘကျနဲ့ မကျြနှာလုပျကွ• သူကတော့ ဒါမြိုးကိုလဲ မသိ၊ လုပျလဲ မလုပျတတျ။ နယျကိုဆငျးရငျး နှမျးပါးသူတဈယောကျတှရေ့ငျ,သူလကျက သူ့အိတျကပျဆီ အလိုလြောကျ။ လမျးပျေါမှာ ခမျြးနရှောသူကို အနှေးထညျဆငျးဝတျပေးတဲ့ ဗိုလျခြုပျကိုပဲ သတိရသေးတော့။
အနီရောငျကာဗာနဲ့ iPad လေးတဈခုက သူ့စားပှဲပျေါမှာအမွဲရှိတယျ။ သူသှားလရောတိုငျးလိုလို ပါတယျ။ ဒါက သူ့ရဲ့ တနျဖိုးအရှိဆုံးစညျးစိမျတဲ့။ ပွထားတဲ့ ဓာတျပုံမှာ ဦးထုတျကွီးနဲ့ အမြားနညျးတူ ထိုငျစားနတေဲ့သူ့ကိုမွငျကွရလိမျ့မယျ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးလို အကွှငျးမဲ့ရိုးသားဖွောငျ့မတျသူတှေ မွနျမာ့နိုငျငံရေးလောကမှာ ဘယျနှဈယောကျမြားရှိနိုငျမလဲ? ဟော့ဒီမှာ တဈယောကျ။•••••••
[ဒီ Post အခကျြအလကျတှနေဲ့ ဓာတျပုံတှအေတှကျ ကိုသူရအောငျ ကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ]